C/kariin Guuleed “Dowladda Mas’uuliyad weyn ayaa ka saaran hirgelinta nidaamka Federaalka” – idalenews.com
Wasiirka arrimaha gudaha iyo Amniga Qaranka C/kariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ka go’an tahay in dalka oo dhan ka hirgeliso nidaamka federaalka, xilli uu socdo qorshe Xukuumada ugu diyaarineyso gobolada dalka in dadkooda ay soo doortaan Maamulo.
Isagoo ka hadlayay barnaamij dood ah oo maanta jimco ah ka baxayay Radio Muqdisho ayuu wasiirka tilmaamay in dowladda Soomaaliya mas’uuliyad ka saaran tahay sidii Federaal loo hirgelin lahaa.
“Dowladda Mas’uuliyad weyn ayaa ka saaran hirgelinta nidaamka federaalka, sidaas darteed Baarlamaanka waxaa uu jaagoyn doonaa tirada maamul goboleedyada dalka”ayuu yiri C/kariin Xuseen Guuleed.
Wasiirka ayaa soo hadal qaaday heshiiskii dowladda Soomaaliya la saxiixatay Culumaa’udiinka Ahlusuna, kaasoo uu xusay inuu qeyb ka yahay dadaalada lagu doonayo in maamulada dalka lagu dhiso.
Dhinaca kale Wasiirka Arrimaha gudaha oo ka hadlay qiima dhaca doolarka iyo sicirka raashinka ayaa waxaa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay wado qorshe wax looga qabanayo xaaladahaas, waxaana uu tilmaamay inay dalka keeni doonaan raashin qiimo jaban oo lagu jebiyo sicirka ay ganacsatada ku qaaliyeen Ganacsatada.
Si kastaba ha ahaatee dowladda Soomaaliya ayaa aad ugu howlan sidii is bedel ugu sameyn laheyd maamulada dalka, iyadoo dhowaan la filayo in qaar ka mid ah maamuladii horay u jiray inay ku bedesho maamulo cusub oo KMG ah, kuwaas oo ka shaqeynaya nidaam dadka ku soo dooranayaan cidii hogaamin laheyd.